search 21 jobs founded for you
Map Design and Printing
5 applicants (Avg bid) 380000 MMK
Adobe illustrator ကျွမ်းကျင် သူဖြစ်ရမည်။မြေပုံများပြုလုပ်ခြင်း၊ မြေပုံများပြန်ပြင်ခြင်း၊ အချက်အလက်ဖြည့်ခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Design & Creative Photoshop Illustrator
Plan and Creat Content
4 applicants (Avg bid) 450000 MMK
နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တစ်ဦး၏ Vlog များရိုက်ရန်အတွက် Creative idea ကောင်းကောင်းဖြင့် ထိုအနုပညာရှင်ကို တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးအကြံပေးကာ အနီးကပ်စီစဉ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ Vlog များအား edit လုပ်ပေးခြင်း နှင့် အနုပညာရှင်၏ Life Style ကိုလည်း လိုအပ်သလို Manage လုပ်ပေးနိုင်ရမည်။ အနုပညာရှင်၏ Page တွင်တင်မည့်Post များအ...
Digital Marketing Writing skills Creative Writing
Sales Promoter (YGN)
20000 - 20000 MMK
1 applicants 20000- 20000 MMK
၂၁.၂.၂၀၂၀ မှ ၂၃.၂.၂၀၂၀ အထိ ရိုးရာအထည်ဆိုင်တွင် Sales Promoter အနေဖြင့် ၃ ရက်လုပ်ရမည်။ မနက် ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီအထိဖြစ်သည်။ ၃ ရက်လုံးလုပ်နိုင်မည့်သူများသာလျှောက်ထားပေးရန်။
Sales & Marketing Customer Service Promotion Activities
Social Media Post Translator ( From english to burmese )
23 applicants (Avg bid) 32457 MMK
Hello I need someone to quickly translate posts for social media platforms. Please quote me on price per post. Must be proficient in english and burmese.Must be able to type in both unicode and zaw gyi.Need to also show me previous writings you did, thanks.
Digital Marketing Typing Content Writing Zawgyi Unicode
6 applicants (Avg bid) 141945 MMK
Data များကို copy , paste လုပ်ပေးရမည်။ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ data (၂၀၀၀၀)ကျော်ခန့်ရှိမည်။ ၁၂ ရက်အတွင်း ပြီးအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရမည်။ Client ရုံးသို့သွား၍ တနင်္လာ မှ သောကြာနေ့ အထိ ရုံးချိန်အတိုင်းသွားရောက်လုပ်ဆောင်ပေးရမည်။
Admin Support Typing
Content Writing and Visuals
14 applicants (Avg bid) 93571 MMK
Facecbook page အတွက် contents and visual များရေးသားရန်အတွက် freelancer များလိုအပ်နေပါသည်။
Digital Marketing Content Writing
Fixing issues and adding new features for Flutter project
8 applicants 500- 1000 USD
A Flutter project needs to be finished. Various open bugs have to be fixed andacouple of new features need to be added. This isaCRUD app. No special features. The estimated duration is one month, but this isagenerous estimate. We hope to be able to finish this earlier.We are very flexible. You...
Looking for creative power point designer
5 applicants (Avg bid) 46000 MMK
We are looking foraperson which is strong in the use of presentation and design. Someone who thinks like it is 2020., aware of the trends of this moment. Preferable own and new ideas. Afterameeting you can take the project home and come with some proposals, after that the fine tuning should be d...
Design & Creative Photoshop PowerPoint
Products Photo Shooting
50000 - 150000 MMK
7 applicants 50000- 150000 MMK
We needafreelance photographer who can take photos for child products onceaweek for three months. Just taking the photos, no retouching required.
Media Digital Photography Commercial Photography
50000 - 50000 MMK
36 applicants 50000- 50000 MMK
- ရုံးတက်စရာမလိုဘဲမိမိအိမ်၌သာပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည့်အတွက်ကွန်ပျူတာရှိရမည်။- ကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။- အင်္ဂလိပ်စာအတော်အသင့်ဖတ်တတ်ရမည်။- ဘောလုံးသတင်းရေးရမည်ဖြစ်သည့်အတွက်ဘောလုံးအကြောင်းအနည်းငယ်နားလည်ရမည်။
Writing Typing English (UK) English (US) Internet & Email Writing skills Copy Writing